होटेल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने शर्तसहित भदौ १६ देखि यी देशमा नियमित उडान – HostKhabar ::
होटेल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने शर्तसहित भदौ १६ देखि यी देशमा नियमित उडान
काठमाडौं : सरकारले पीसीआर परीक्षण सहज भएका देशहरुबाट शर्तसहितको नियमित उडान गर्ने भएका छन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ १६ गतेदेखि शर्तसहित नियमित उडान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए।
सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाका अनुसार दैनिक ५०० यात्रु नकट्ने गरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्राललयले उडान तालिका बनाउनेछ । यसरी हुने उडानमा नेपाली नागरिक, कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरु आउन सक्नेछन् र उनीहरुको ७२ घण्टाभित्र पीसीआर टेष्ट गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हुनुपर्छ ।